အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး ကွယ်လွန် | ဧရာဝတီ
ရန်ပိုင်| November 15, 2012 | Hits:1
| | အဆိုတော် ခင်မောင်တိုး (ဓာတ်ပုံ – မြကေသီခိုင် / Facebook)
ကိုခင်မောင်တိုးနှင့် စက်မှုတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကတည်းက အနုပညာရောင်းရင်း နောက်တဦးဖြစ်သည့် ကဗျာဆရာ စာရေးဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ကလည်း မိသားစု ကဲ့သို့ နေထိုင်သည့် သူငယ်ချင်း တဦး တိမ်းပါးသွားခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် ဂီတလောကအတွက် အစားထိုးမရသည့် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ကိုင်ဇာ၊ မေဆွိ၊ မေခလာတို့ရဲ့ “သူငယ်ချင်း သုံးယောက်” Live Show ကျင်းပမယ်ပြည်တော်ပြန် ကျောင်းဖွင့်မည့် DJ တဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမောင်မောင်ဇော်လတ်၊ အယ်ဖြူနှင့် ကိုယ်တို့မြို့လေးဆီ အမှတ်တရဖိုးသားရဲ့ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ကိုငှက် (သို့) ထူးအိမ်သင် သို့ အမှတ်တရ အလွမ်းများ
zaw kind November 15, 2012 - 12:53 pm တန်ဘိုးရှိတဲ့လေးစားရတဲ့ မြန်မာ ဂီတပညာရှင်တဦး ပျက်စီးသွားလို့ ၀မ်းနည်းပါသည်…
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 16, 2012 - 3:57 am ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ အလေးပေးတဲ့ တကယ် အစားထိုးမရတဲ့ အနုပညာရှင်တဦးပါ။
ကောင်းရာ သုဂတိ လားမှာ သေချာပေမယ့် အသွားစောလို့ နှမျောမိပါတယ် အကိုကြီး။
Reply ရာဇာ November 15, 2012 - 1:09 pm ကိုတိုးကြီး က ဒီတခါတော့ သီချင်းထဲကအတိုင်း အနောက်ဖက်မျက်နှာ ကျားကွက် တကယ်ရွှေ့လိုက် ပြီပေါ့………..
ကိုတိုးကြီး ကောင်းရာ သုဂတိ လားပါစေ…ဗျာ………………..
Reply အောင်မျိုးမြတ် November 15, 2012 - 9:22 pm ကိုတိုးကြီး…ဘယ်လိုပြောရမလဲ။နှမျောတယ်ဗျာ။မြန်မာဆန်တဲ့မြန်မာ့သံစဉ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့..ကိုတိုးကြီးကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
Reply Nway Nway Lynn November 15, 2012 - 9:28 pm နှမြောစရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အနုပညာကတော့ ရှင်သန်နေဦးမှာပါ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ
Reply zaw November 16, 2012 - 12:01 am မိသားစုနဲ.ထပ်တူ၊ ၀မ်းနဲကြေကွဲ၇ပါတယ်။
Reply maung maung aye November 16, 2012 - 1:19 am ကိုတိုး ကြီးဆုံးပါးသွားတဲ့ အတွက် ဝမ်းနည်း ကျေကွဲမိပါတယ်။
Reply kyawmintun November 16, 2012 - 7:37 am သူငယ်ချင်းမင်းမင်းဦး…..ထပ်တူထပ်မျှဝမ်းနည်းမိတယ်….သူငယ်ချင်းအဖေကို အမြဲလေးစားလျက်ပါ…
Reply love zayo November 16, 2012 - 11:52 am ကိုငှက်၊ဗိုလ်ထီးနဲ့ ကိုတိုးကြီး တို့ရဲ့ဂီတသံတွေအမြဲရှင်သန်နေပါစေ…..
Reply saw wai zin November 17, 2012 - 12:07 pm အရမ်းကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်သူနဲ့ကအရမ်းကိုခင်မင်ခဲ့ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါအရမ်းကိုနှမြောပါတယ်ဗျာ..
Reply dragon November 16, 2012 - 8:30 pm ကောင်းတဲ့သူတွေက ဘာလို့စောစောသေတာလဲ လောကကြီးက
မတရားဘူး အန်ကယ်ကြီး ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ
Reply မျိုးဆက် November 16, 2012 - 11:57 pm ကိုတိုးကြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်။
Reply aungsan November 17, 2012 - 12:35 am လွမ်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုတိုးကြီးသံစဉ်တွေ
Reply အောင်အောင် November 18, 2012 - 1:49 am နှမျှောမိတယ် ဦးတိုးကြီးကိုဗျာ သံဇဉ်ကောင်းကောင်းလေး ဘယ်လိုဆက်လက်ထင်ရှားနိုင်တော့မလဲဗျာ သူရဲ့သီချင်းတွေက အေးတယ် နားဝင်ချိုတယ် အသံကလဲ အောင်တယ်လေ ဗျာ လိုက်ဆိုလို့ လဲ ခတ်တယ် အဲဒါကြောင့် အရမ်းကြိုက်မိတယ် အခုလဲ ဦးတိုးကြီး သီချင်းကိုနားထောင်နေလျက်ပါ
Reply arker oo November 18, 2012 - 12:46 am ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ